सर्वाधिक खोजीमा प्रियंका !
एजेन्सी । अभिनेत्री प्रियंका चोपडा गुगलमा सबैभन्दा बढी खोजिने बलिउड सेलिब्रेटी बनेकी छन् । हालै गरिएको सर्वेक्षणमा उनको नाम अग्रपंक्तिमा आएको हो ।
सलमान खानको ‘भारत’ छोड्दा प्रियंकालाई कति घाटा ?
काठमाडौं । अभिनेत्री प्रियंका चोपडाको कमब्याक फिल्म ‘द स्काई इज पिंक’ दर्शकमाझ रिलिजमा आइसकेको छ । यो फिल्मले बक्स अफिसमा खासै राम्रो कलेक्शन गर्न सकिरहेको छैन् । करीब ५० करोडको बजेटमा बनेको यो फिल्मले अहिलेसम्म जम्मा १० करोडको बक्स अफिस कलेक्शन गरेको छ ।
बलिउडका सर्वाधिक धनी १० अभिनेत्रीहरु
एजेन्सी । बलिउड फिल्मी उद्योगमा हरेक वर्ष कैयौं फिल्महरु प्रदर्शनमा आउने गर्दछन् । फिल्मी उद्योगमध्ये विश्वको सबैभन्दा ठूलो फिल्म उद्योगमा बलिउड फिल्मी उद्योग पनि पर्दछ । यसका साथै बलिउडमा अभिनय गरेर कलाकारहरुले मनग्य आम्दानी पनि गर्दछन् । यसै सन्दर्भमा बलिउडका १० अभिनेत्रीहरुबारे चर्चा गरौं जसले फिल्मी क्षेत्रबाट नै मनग्य रुपमा आम्दानी गर्दछन् । उनीहरुको कुल सम्पत्ति कति रहेको छ जानकारी लिऔं ।
चर्चामा प्रियंकाका महँगो ड्रेस !
पछिल्लो समय अभिनेत्री प्रियंका चोपडा आफ्नो नयाँ फिल्म ‘द स्काई इज पिंक’का कारण चर्चामा छन् । यो फिल्ममा उनको अपोजिटमा अभिनेता फरहान अख्तार देखिदैछन् । फिल्मसँगै अभिनेत्री प्रियंका आफ्नो ड्रेसका कारण पनि चर्चामा आएकी छन् । भर्खरै उनी न्यूयोर्कमा स्पट गरिएको थियो, जहाँ उनी पेड डायनाको साथमा देखिइन् ।
काठमाडौं । बलिउडदेखि हलिउडसम्म अभिनेत्री प्रियंका चोपडा पावरफुल अभिनेत्रीको लिस्टमा चर्चित छन् । आफ्नो निजी जीवनलाई लिएर प्रियंका खुल्ला रुपमा जिउन चाहछन् । पछिल्लो समय प्रियंका र उनका श्रीमान निक जोन्स प्राय सँगै देखिदै आएका छन् ।
बलिउडका सुन्दर अभिनेत्री बिकिनी अवतारमा कस्ता देखिन्छन् ?
एजेन्सी । बलिउड फिल्मका अभिनेत्रीहरु विभिन्न भूमिकामा पर्दामा देखिने गर्छन् । कुनै फिल्ममा मुख्य भूमिकाको पात्रको रुपमा पनि पर्दामा देखिने गर्छन् । बलिउडका मुख्य अभिनेत्रीहरु खुलेर बिकिनी अवतारमा रहन्छन् । यहाँ उक्त अभिनेत्रीहरुको बिकिनी पोज देख्न सकिन्छ ।
निक जोनास र प्रियंका चोपडाले कतिमा बेचे आफ्नो घर ?
सलमानको ब्यंग्य– ‘‘भारत’ छाडेर श्रीमती बन्न रुचाइन् प्रियंका’
काठमाडौं । अमेरिकी पप गायक निक जोनससँग विहे गर्नकै लागि भनेर अभिनेत्री प्रियंका चोपडाले साइन गरिसकेकी सलमान खानकोे फिल्म ‘भारत’ छोडेकी थिइन् । यो विषयमा खुलेर नबोले पनि अभिनेता सलमानले बेला–बेलामा प्रियंकालाई वचनको झटारो हान्ने गरेका छन् ।